Muxuu dadka reer Iswiidhan uga dhigan yahay u dabaal-daga maalinta“Fettisdagen”? | Somaliska
Maanta oo kale waa maalin qiimo gaar ah u leh dadka reer Iswiidhan, waxaa ay si aan caadi aheyn u cunaan doolshaha jilicsan ee Semla la yiraahdo. Waana caado diimeed soo jireen ah oo waqti dheer la sameeyn jiray. Haddaba waxaan akhristayaasheena aan u soo gudbineynaa taariikh kooban oo ku saabsan maalinta loo asteeyey cunista doolashahaas jilicsan ee “Fettisdagen” loo yaqaano.
Doolshahan jilicsan ee Semla la yiraahdo waxaa uu ka kooban yahay caano fadhiya oo ah nooca toortaha loogu talagalay, heyl iyo faniilyaha( carfiso). Waa mid aad u macaan badan oo aadan ka dhargeyn haddaadan subbuga caanaha fadhiya ka baqeyn iyo sokorta ku jirta awgeed waa mid aan oran karo afka lagama qaadi karo. Waxaa lugu cunaa kafee ama caano, hadba kii la doono. Xilligii dhexe dalkaani Iswiidhan waxa uu ahaa dal heeysta madhabta katoliga ee Diinta masiixigga. Muddadaasi dadku waa ay soomi jireen iyagoo ka soomi jiray hilibka, ukunta iyo caanaha. Si dadku ay jirkoodu u yeeshaan tamar ay soonkaas ugu adkeeystaan waxaa ay saddex beri ka hor cuni jireen cuntada dufan badan leh iyo cabitaan macaan. Waxeey maalintaas uga dhignaan jirtay maalin weyn oo farxad iyo damaashad ku laran yahay. Sidaas ayaana loogu magac darray “Fettisdagen” Maalintii dufanka.
Martin Luther, wuxuu ahaa baadari Jarmal ah oo doonayey in isbadal lugu sameeyoka soo madhabta Katoliga ee diinta masiixiga xiligii u dhaxeeysay sanadihii 1483–1546.
Iyadoo caado diimeedkaasi soo jireen aheeyd, ayaa boqorkii dalka xukumi jiray qarnigii 15-aad ee Gustav Vasa ku dhawaaqay in dalku qaatay madhabta protestantism. Madhabtan oo ah mid kacdoon ka dhan ahaa muddadii u dhaxeeysay 1483–1546 oo uu abuuray baadari lugu tilmaamay inuu gadooday oo la oran jiray Martin Luther oo ahaa Jarmal baadari ah. Boqorkii Gustav ayaa aad ugu riyaaqay fikiradihii uu Martin Luther kaga soo horjeestay madhabadkii Katoliga iyo wadaadkii ugu sareeyey madhabtaasi ee Roma fadhiyey oo waqtigaasii dhamaan kansiidaha laga xukumayey.
Marba haddii isbadal ku yimid mahabtii Katoliga ee soonka dadka fareeysay, waxaa meesha ka baxay macnihii diin ahaanta loogu cuni jiray, laga soo bilaabo xilligaasi balse ilaa i minkadan waxaa halkiisii ka sii jira caadadaasi lugu cuni jiray doolshaha jilicsan ee Semla. Maanta oo talaado ahna waxaa dadka reer Iswiidhan ay cuneen in ka badan 5 malyan oo doolshaha Semla. Iyadoo goobaha shaqada, maqaayadaha kafeega laga qabo dukumaanka iyo xarumaha lugu iibiyo mac macaanka aad dareemeeyso sida xad dhaafka ah ee ay dadku u cunayaan una macaansanayaan cunistiisa.